Guddoomiyaha G/Banaadir Taabit oo sharraxaad ka bixiyay wax-yaabihii u qabsoomay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiyaha G/Banaadir Taabit oo sharraxaad ka bixiyay wax-yaabihii u qabsoomay
Guddoomiyaha G/Banaadir Taabit oo sharraxaad ka bixiyay wax-yaabihii u qabsoomay
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Taabit Cabdi Maxamed,ayaa maanta sharaxaad ka bixiyay waxyaabihii u qabsoomay Maamulka Gobalka iyo qorshayaasha kutalagal ah ee la doonayo in laga hirgaliyo Caasimadda Muqdisho.
Guddoomiyaha oo maanta ka qeybgalay kulanka golaha wasiirada Xukuumada Soomaaliya oo uu shir gudoominaaye Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Mudane Xasan Cali Kheyre,ayaa xusay in Maamulka Gobolka Benaadir uu u qabsoomay wax badan oo dhaxalgal ah.
Mudane Taabid,waxa uu qiray in la hirgaliyay qorshayaal muuqda islamarkaana aan Caasimada horey looga qaban ,wuxuuna ka codsaday Dowlada Dhexe ee Soomaaliya in Maamulka Gobolka Banaadir loo kordhiyo dhaqaalaha soo gala si loo xaliyo howlaha Ballaraan ee maamulka hor yaalla.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir waa markii ugu horreysay ee uu Golaha Xukuumadda hor-dhigo Hiigsiga caasimadda iyo muujinta lakabyada uu leeyahay isla xisaabtanka,isagooo soo bandhigay qorshe cusub oo lagu casriyeynayo Muqdisho.
Previous article7 kamid ah Al-shabaab oo xalay lagu diley degmada Jilib
Next articleAgaasimaha guud ee Wasaaradda Dastuurka oo la kulmay Sarkaalka Arrimaha Siyaasadda ee Safaaradda USA